January 8, 2022 - ApannPyay Media
January 8, 2022 by ApannPyay Media
နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား
နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား ကော်ဖီမစ်မှာ ပစ္စည်း ၃ မျိုးပါဝင် ပါတယ်။ ၁။ ကော်ဖီမှုန့် ၂။ သကြား ၃။ ကော်ဖီမိတ် ၁။ ကော်ဖီမှုန့်က မူလက ကော်ဖီစေ့ကနေ တဆင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချက်ချင်း အရည်ပျော်စေနိုင်တဲ့ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီမှုန့် ကို သုံးကြပါတယ် ။ အခု နောက်ပိုင်း ပိုစျေးသက်သာတဲ့ ကော်ဖီမှုန့် အတုတွေ သုံးလာကြပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က အဆ ၁၀၀ – အဆ ၂၀၀ အထိ သက်သာတယ်လို့ ထိုင်ဝမ်က အစားအသောက် ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ်မှာ ကော်ဖီမှုန့် အတုကို ပဲစိမ်းအမှုန့် ၊ ကော်ဖီရနံ့ လို့ခေါ်တဲ့ … Read more
ကားဘက်မှန်တွေ အခိုးမခံရအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတခု (လွယ်လွယ်လေးပါပဲ)
ကားဘက်မှန်တွေ အခိုးမခံရအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတခု (လွယ်လွယ်လေးပါပဲ) အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ညအိပ်ရပ်ထားတဲ့ အိမ်စီးကားတွေရဲ့ ဘက်မှန်တွေ ခွာယူပြီး အခိုးခံနေရတာ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ကားပိုင်ရှင်တွေက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ကားပိုင်ရှင်တွေခမျာ ကိုယ့်ကားမှန်ကိုယ် ပိုက်ဆံပေး ပြန်ဝယ်နေရတဲ့ ဘဝရောက်နေပြီး စျေးကွက်မှာ ကားဘက်မှန်တွေကို လွတ်လပ်စွာခိုးယူ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်နေကြတယ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတခု ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကား ဘက်မှန် ခိုးမရအောင် အပေါ်မှာ ကားနံပါတ်ပေါ်အောင် မှန်ကို အမှုံစားပြစ်လိုက်တယ်.. အဲ့ဘက်မှန် ခိုးရောင်းဖို့ အတော်စဉ်းစားရမယ်.. ရောင်းတယ်ပဲထားအုံး ဆိုင်သမားက အော်တို သူခိုးပစ္စည်းရောင်းတာဖြစ်သွားပါပြီ.. အခြားကားပိုင်ရှင်က နံပါတ် မတူပဲ ဘက်မှန်တပ် သုံးထားရင် သူခိုးဆီက ဝယ်ထားသလိုလို ကိုယ်တိုင်ပဲ ခိုးထား … Read more
နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် အံ့ဩရတဲ့ မြန်မာပြည် ကားပွဲစားလောကရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား အထာများ
နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် အံ့ဩရတဲ့ မြန်မာပြည် ကားပွဲစားလောကရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား အထာများ ကားပွဲစားတွေရဲ့ စကားအထာတွေဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်လှပါတယ်။ ကားအမျိုးအစား နာမည်တွေကိုလည်း အမျိုးမျိုး ပေးတတ်လွန်းလို့ မြန်မာပြည်က ကားနာမည်တွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေက အတော် အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာတော့ ပွဲဇိုးလေးတွေရဲ့ လက်သုံးစကားတွေရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး စကားလုံးကတော့ လုပ်ချက်မရှိ ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ လုပ်ချက်မရှိဘဲ ပြင်ချက်တွေပဲ ရှိတာကို ဆိုလိုတာပါ။ မိန်းကလေးတစ်လက်ကိုင် ဆိုတာကတော့ ကားပေါ်ယောင်္ကျားလေးမတင်ပဲ မိန်းကလေးတွေပဲ တင်မောင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကျပ်ဖိုးမှထပ်ထည့်စရာမလိုဆိုတာက တစ်စီးလုံး အခွံချိန်းရမှာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန့်နံ့လေးတောင် သင်းနေသေးတယ် ဆိုတာကတော့ ဂျပန်ဂတုံးလာစီးသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Anniversary ပါဆိုရင်တော့ စျေးပိုပြီသာမှတ်လိုက်ပါတော့။ အင်ဂျင်ပါဝါကြီးပေမယ့် ဆီမစားပါကတော့ ရပ်ထားတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
စုဘူးနဲ့ ပိုက်ဆံစုမယ့်သူတွေ အထူးဂရုပြုရမယ့် အချက်များ (ကိုယ့်ချွေးနှဲစာလေးတွေ အလကား မဖြစ်စေဖို့ပါ)
စုဘူးနဲ့ ပိုက်ဆံစုမယ့်သူတွေ အထူးဂရုပြုရမယ့် အချက်များ (ကိုယ့်ချွေးနှဲစာလေးတွေ အလကား မဖြစ်စေဖို့ပါ) ယခုတလော စုဘူး ဖောက်တဲ့သူတွေ အများဆုံး ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ စုဘူးထဲမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အမည်းရောင် အစက်အပြောက်ပုံစံနဲ့ မှိုတွေ တက်ပြီး သုံးမရဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘဏ်မှာ ပြန်လဲလို့ ရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လက်ရှိခေတ်ကာလကြီးမှာ ကိုယ်စု ထားတဲ့ ငွေကိုတောင် ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ ဘဏ်က သုံးမရတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပြန်လဲပေးဖို့ဆိုတာ လူ့ပြည်က အပ်တစင်းနဲ့ နတ်ပြည်က အပ်တစင်း ထိတာကမှ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိစုဆောင်းထားတဲ့ ချွေးနှဲစာလေးတွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ စုဘူးနဲ့ ပိုက်ဆံစုရမှာ အထူးဂရုပြုရမယ့် အချက်တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) … Read more
တံမြက်စည်း (၃) ချောင်း၊ ဈေးဦးပေါက် တသိန်းဖိုးနဲ့ မျက်ရည်တွေ ကြားက အဘွားပေးတဲ့ ဆုတောင်း အဖွား စျေးဦးပေါက်က…တသိန်းတောင် ရတာလား အဖွား အသက် (၉၀) နှစ်၊ သမီး တယောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမီးက လေဖြတ်နေပါတယ်တဲ့…သမီးကို တံမြက်စည်း ရောင်းပြီ ရှာကျွေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ဗျ။ အဖွားကို စျေးထဲ တွေ့တဲ့ အချိန်က…အဖွား ချမ်းပြီ တုန်နေရှာတယ်…စျေးဦးလဲ မပေါက်သေးဘူး ထင်တယ် အဖွား…တံမြက်စည်း ဘယ်လိုရောင်းလဲ ဗျ၊ သားရယ်…(၃)မျိုးရှိပါတယ်၊ တခုက ၁၂၀၀၊ ဒါက ၁၇၀၀၊ ဒါလေးက ၁၈၀၀ ပါ သား ဟုတ် အဖွား…စျေးဦးပေါက်ပြီလား ဗျ၊ မပေါက်သေးပါဘူး သားရယ်၊ ဒါဆို သား တမျိုးကို တခုဆီ … Read more
နေ့စဉ်ရက်ဆက်မစားသင့်တဲ့အစားအစာများ (၁) မြင်းသေးနှင့်စိမ်ထားသောဆေးဘဲဥ ကယ်စီယမ်ဓာတ်ကိုဆုံးရှုံးစေ၍ အရိုးပျော့ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ (၂) အီကြာကွေး ကျောက်ကပ်အလုပ်ပင်ပန်းစေ၍ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်။ ( ၃) အသားကင် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ( ၄) ချဉ်ဖတ်အမျိုးမျိုး နှလုံးကိုပင်ပန်းစေသည်။သွေးကိုတိုးစေသည်။ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ (၅ ) ဝက်အသည်း ကိုယ်လက်စထရောကိုတိုးစေသည်။နှလုံးနှင့်ဦးနှောဏ်သွေးကြောကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ( ၆) အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်အမျိုးမျိုး အဆိပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ (၇) နေကြာစေ့ အသည်းတွင်အဆီများစုစေနိုင်သည်။ ( ၈) ပဲပုတ် ရောဂါပိုးမွှားကိုကူးစက်စေနိုင်သည်။ (၉) အချိုမှုန့် လူကို အကျိုးပြုစေသော ဓာတ်လုံးဝ မပါဝင်ပါ။ ခေါင်းမူးl ခေါင်းကိုက်l အော့အန်ချင်စေသည်။ စိတ်မတည်ငြိမ် ဖြစ်စေသည်။ယောင်္ကျား မိန်းမ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအတွက် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေသည်။ ပြန်လည်မျှဝေသည် ။ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္မစားသင့္တဲ့အစားအစာမ်ား (၁) ျမင္းေသးႏွင့္စိမ္ထားေသာေဆးဘဲဥ ကယ္စီယမ္ဓာတ္ကိုဆုံးရႈံးေစ၍ အရိုးေပ်ာ့ေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္သည္။ (၂) အီၾကာေကြး … Read more
နေပူထဲမှာ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် ရောင်းတာတောင် ဈေးဦးမပေါက်သေးတဲ့ တံမြက်စည်းသည် အဖိုး
နေပူထဲမှာ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် ရောင်းတာတောင် ဈေးဦးမပေါက်သေးတဲ့ တံမြက်စည်းသည် အဖိုး ပိုက်ဆံ အရွက်တွေ ပိုနေတယ်….သား တံမြက်စည်းကြမ်း ရောင်းတဲ့ အဘ၊ အဘ ဘယ်လိုရောင်းတုန်း၊ အသေး – ၃၀၀၊ အကြီး ၅၀၀၊ ဟုတ် အဘ….ဘယ်နှခု ရှိလဲ မသိ? ရှိတယ် သားလေး….အိတ်ထဲမှာလဲ ရှိတယ် သား၊ ဒါဆို အသေး ဘယ်နှခု ရှိလဲ အကြီး ဘယ်နှခုရှိလဲ ကြည့်ရအောင် အဘ အသေး (၂၀) ခု….အကြီး (၄)ခု ရှိ…စုပေါင်း – ၈၀၀၀၊ သား…..အကုန် ယူမယ် အဘ၊ အမ်…အများကြီး မလိုပဲ မယူပါနဲ့ သားရယ်၊ လိုတာပေါ့ အဘရဲ့…..အမေလဲ မှာထားတယ်…..အဒေါ်လဲ မှာထားတယ်…. ဘုန်းကြီးကျောင်းလဲ … Read more